FJKM Ankadifotsy Levitikosy 10.1-20 : FANOMPOANA AN’ANDRIAMANITRA = FANKATOAVANA NY BAIKONY / Mana isan'andro / Soratra Masina / Accueil - FJKM Ankadifotsy
Levitikosy 10.1-20 : FANOMPOANA AN’ANDRIAMANITRA = FANKATOAVANA NY BAIKONY 08/03/2018 20:14
Aza atao tsirambina ny fanompoana: Arona sy ny zananilahy ihany no notendren’Andriamanitra ho mpisorona teo amin’ny Isiraely. Antso manokana sy torolalana mazava no nanosorana azy ireo. Vao fanombohan’ny asany anefa dia tsy nanao izany araka izay toromarika nomen’Andriamanitra i Nabada sy i Abiho.
Aleon’Andriamanitra vitsy nefa tena mankato Azy. Na vitsy aza nefa misy tsy mendrika eo anatrehany, dia mbola anesorany ihany. Tsy ny toerana nanendren’ny Tompo no zava-dehibe fa ny fanaovana ny sitrapony eo amin’izany toerana izany.
Mahatoky amin’ny fanompoana: Ny mpanompon’Andriamanitra dia nataony ho fitaratra hijeren’ny olona ny maha velona Azy. Tsy ny teniny sy ny hafatra entiny ihany fa ny fiainany sy ny fitondrantenany koa. Mety ho mafy sy mavesatra ny fihetsehampo misy ao amin’ny olona noho ny zavatra misy eo amin’ny fiainana, tahaka ny fahafatesan’ny zanaka ohatra, fa saingy mbola lehibe noho ny fontsika ny Tompo (I Jaona3.18-24).
Matotra amin’ny fanompoana: Ny mitondra ny fahotan’ny olona eo anatrehan’Andriamanitra sy ny mampianatra azy ireo izay ankasitrahany no fanompoana nanosorana manokana ny mpisorona. Masina dia masina izany ka mila mitandrina tsy ho tafalatsaka amin’izay mety manimba na mampihena na nampivilivily ny fifantohana sy ny fahazavan-tsaina, toy ny toaka ny mpisorona. Raha manaiky ny antson’Andriamanitra hanompo Azy isika dia «aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika ». (Hebreo12.1)
Fanontaniana: Inona no mety mbola manakana anao tsy handroso lalindalina kokoa ao amin’ny Tompo ?